I-Intanethi - Wikipedia
I-intanethi uhlelo oluqukethwe amkhompyutha ayizigidi ahlangene ndawonye kuhleloxhumano olunzulu kuwo wonke amagumbi omhlaba olusebenzisa i-Internet protocol suite (TCP/IP). Uma uxhumeke kuyo i-intanethi nomshini osuke uwusebenzisa okungaba yikhompyutha noma umakhalekhukhwini nawo ungena kulo lolu xhaxha lohleloxhumano. Lolu hleloxhumano lohleloxhumano luqukethe olungasese, olomphakathi, olwamabhizinisi kanye nolwahulumeni. Uhleloxhumano olusezweni noma emhlabeni oluxhumene ngobuchwepheshe obuno-gesi, obungenazo izintambo kanye nobama-fibre optics. I-inthanethi iqukethe ulwazi oluningi okubalwa amakhasi amakhulu-ahlangene kanye namahlelokusebenza esisizindalwazi sokuxhumana somhlaba jikelele (WWW), umbikombani, ucingo lokuxhumana, kanye nokwabelana ngamafayela.
I-intanethi ibalulekile esikhathini samanje ngoba ulwazi olungini luqukethwe kuyo i-intanethi. Abantu akusadingakali ukuthi baye kobheka ulwazi emtapweni wolwazi noma bathenge amaphephandaba ukuze bathole ulwazi, sekulula manje umuntu ungena kwi intanethi athole lokhu akufunayo noma ikuphi esebenzisa ikhompyutha noma umakhalekhukhwini. I-intanetheni futhi yenza ukuxhumana phakathi kwabantu emhlabeni jikelele kube lula futhi kungambi eqolo. Usukwazi ukuxhumana nomuntu okwelinye izwe nixoxe indaba yenu niyiqede nibukana, lobu ubuchwephese be-video calling.
Okubalulekile nge-intanethi ukuthi iyakwazi ukuthatha umhlaba wonke iwusondeze, iwubeke esibukweni sekhompiyutha noma umakhalekhukhwini. Nge-intanethi abantu bayakwazi ukuxhumana nebhange, izitolo, imitapo yolwazi, izihlobo nabangani, ngingabala ngithini. Ukuthuthuka kobuchwepheshe be-intanethi sekuholele ekutheni kwenziwe imali esebenza khona kwi-intanethi kuphela ukuthenga konke okudingayo. Lemali esebanza kwi intanethi kuphela ibizwa ngokuthi ama-crypto currencies, edume kakulu yaziwa ngokuthi yi-Bitcoin eyasungulwa ngonyaka wezi-2009 ngumlisa ozibiza ngoSatoshi Nakamoto.
Umthumeli we-intanethi ngokuka Buky Schwartz, endaweni yaseHolon, ezweni lakwaIsreyili
I-intanethi yenza ukuxhumana kwabantu kube lula, kanti ukuxhumana nako kunobungozi babo. Abantu bavame ukuthumela imininingwano yangasese, abanye abantu bayakwazi ukuyeba leyomininingwano. Bangasebenzisa i-intanethi ukubhebhethekisa amanga noma izimfihlo ezebiwe noma izeluleko ezinobungozi. Ngokomzekelo, lengosi eyaziwa ngo-Facebook isike yaba nezinkinga ngokuvikela imininingwano yabantu yangasese.
Amanye ama-websites angaqola abantu ukuba badawunilode izifo ezingalimaza ikhompyutha, noma ama-spyware apopola abasebenzisi (abuka zonke izinto abazenyayo bese azisa omunye).
Ama-E-mails angaphatha amafayela anobungozi kuma "attachments".
Kuma-internet chatrooms, abantu bengazama ukuzingela abanye noma bezame ukubakhela uzungu noma bebahlukumeze.
I-intanethi iqukethe abantu abaningi abakubona njengokuhlukumezayo, nokuqonde ukuhlukumeza.
Izigilamkhuba zingeba imininingwano yabantu yangasese noma zibaqole ukuba babathumele imali.
"https://zu.wikipedia.org/w/index.php?title=I-Intanethi&oldid=71929" تان ورتل
Last edited on 20 uMasingana 2021, at 12:12
Leli khasi laqeda ukuhlelwa ngo-20 uMasingana 2021, nge-12:12.